नेटफ्लिक्स प्रवृत्ति Utomik | को साथ भिडियो खेलहरूमा आउँदछ क्रिएटिव अनलाइन
नेटफ्लिक्स प्रवृत्ति यूटोमिकको साथ भिडियो खेलहरूमा आउँदछ
यदि नेटफ्लिक्सले एक प्रवृत्ति सेट गर्नुभयो आज सिनेमा हेर्ने तरिकामा, यो कुनै संयोग होइन कि वीडियोगेमहरू अहिले छन्। र हामी सबैलाई आज नै नेटफ्लिक्स प्लेटफर्म थाहा छ। चलचित्र र मूल सामग्री र खरीदको श्रृंखलाको अनन्तता। प्रोडक्शनहरू जस्तै आफ्नै 'उज्यालो' वा अन्य फिल्महरू। Scorsese, Tarantino, Nolan… सबै भन्दा राम्रो फिल्म निर्देशकहरु उनीहरुमा आफ्नो ठाँउ छ। र त्यहाँबाट, HBO, Movistar प्लस, आदि। को Utomik मा पुग्ने छ?
उटोमिकले यस चलनलाई लिएको छ र त्यसलाई आफ्नो भूमिमा लगेको छ। यदि नेटफ्लिक्स सातौं कलाको रानीहरू मध्ये एक हो भने, यूटोमिक भिडियो भिडियो गेममा हुने बहाना गर्दछ। एउटा मञ्च जहाँ मासिक सदस्यता मार्फत तपाईं भिडियो खेलहरूको अनन्त खेल 'भाडा' गर्न सक्नुहुनेछ तिनीहरूलाई प्ले गर्न सीमा बिना। यसले शारीरिक खेलहरूको उन्मूलन गर्न अग्रसर गर्दछ। भिडियो खेल भाँडामा लिनुहोस् र यो बोर नभएसम्म यो प्ले गर्नुहोस्।दिनु'फेरी र अर्को डाउनलोड गर्नुहोस्।
1 यूटोमिक भनेको के हो?
2 कसरी Utomik काम गर्दछ?
3 बाटम्यान बाट मेट्रो २०2033 सम्म
यूटोमिक भनेको के हो?
हामी independent750० भन्दा बढि गेमहरू र १० भन्दा बढी प्रकाशन साझेदारहरू २ वर्ष भन्दा बढीमा एक लाइब्रेरी राख्न कुनै उद्योग समर्थन बिना स्वतन्त्र सुरुवातबाट बढेका छौं। त्यो समर्थनमा वार्नर ब्रदर्स गेम्स, डिज्नी, SEGA, THQ नॉर्डिक, एपिक खेलहरू, कर्भ डिजिटल, IO अन्तर्क्रियात्मक, र अधिक धेरै समावेश छ। यो अरू कुनै सदस्यता गेमि platform प्लेटफर्म भन्दा धेरै हो र यो केवल सुरूवात हो।
यो २०१ Dutch मा डच गेमरहरूको समुदाय द्वारा स्थापित भएको थियो र २०१ 2014 मा पहिलो बीटा संस्करण जारी भयो। अहिले सम्म थोरै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको साथ, यसले यसको अन्तिम संस्करण रिलिज गर्दछ र सफलतापूर्वक प्रदर्शन गरियो।
“अब हामी आधिकारिक रूपमा सुरू गर्यौं, प्रयोगकर्ताहरूले month 750. per प्रतिमाह * वा चार महिनाको लागि पारिवारिक योजनाको लागि month 6.99 9.99 games प्रति महिना forXNUMX० भन्दा बढी खेलहरू खेल्न असीमित पहुँच प्राप्त गर्दछन्। रिलिजले नयाँ र सुधारिएको ग्राहक डिजाइन पनि सामेल गर्दछ।
750० भन्दा बढि गेमहरूको सुरूवातसँग तपाईंको टाउकोमा गणनाहरू सिर्जना गर्न सजिलो छ, यस परियोजनाको नाफाका बारे जान्नुहोस्। यदि एक शीर्ष-निशान खेल € to० मा उठ्छ, people 80 or वा people 6,99 9,99 each प्रत्येक महिना चार व्यक्तिको बीच तिर्ने अधिक लाभदायक हुनेछ। र सबै घरबाट र पर्खेर। सानाको लागि अभिभावकीय नियन्त्रण सहित।
कसरी Utomik काम गर्दछ?
यस समयमा, यूटोमिक क्याटलगसँग renowned 765 प्रसिद्ध कम्पनीहरूका 50 खेलहरू छन्। वार्नरबाट डिज्नी अन्य प्रख्यात कम्पनीहरू जस्तै SEGA, Talltale खेल वा THQ, अन्य बीच। एक क्याटलग जुन एक महिनामा १ 15 वा २० भिडियो गेमहरूको दरमा बढ्दछ, कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा भनेको छ।
महत्त्वपूर्ण कुरा डाउनलोड हुनेछ। आज, बाट स्टोर कुनै पनि खेल कन्सोल वा प्लेटफर्मबाट स्टीम पीसी को लागी, एक खेल अनलाइन किन्न र डाउनलोड गर्न गाह्रो छ। यूटोमिकले यस्तो गर्छन कि यस्तो हुँदैन।
एक भिडियो खेल डाउनलोड गर्दा, तपाईं यसको सुरुवातका लागि आवश्यक सामग्री लोड गर्न कम्तिमा पनि पर्खनु पर्छ। यो लोड, जुन कुल भिडियो खेलको २०% हुन सक्छ, बनेको छ, तपाईं खेल सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाइँ खेल्नुहुन्छ, बाँकी पृष्ठभूमिमा डाउनलोड गरिनेछ। यसले गेमि experience अनुभवलाई असर गर्दैन। यस तरिकाले, यो खेल्नको लागि अधिक इच्छा भएका खेलाडीहरूलाई बोनस दिनेछ।
बाटम्यान बाट मेट्रो २०2033 सम्म
यस तथ्यको बाबजुद कि पछिल्ला दुई बर्षको अवधिमा धेरै कम्पनीहरूले यस्तै प्रकारका सेवाहरू सुरू गरे, जस्तो हो प्लेस्टेशन अब, त्यहाँ यो प्लेटफर्ममा धेरै ठूलो आशा राखिएको छ, जसको उद्देश्य 'भिडियो गेमको नेटफ्लिक्स' बन्ने छ सेवाको बीटा चरणमा सयौं भन्दा बढी कम्पनीहरूसँग सम्झौता पछि।
अहिले योसँग मान्यता प्राप्त नामहरू छैनन्। फिफा वा कल अफ ड्युटी फ्रान्चाइजीहरूसँग खाली ठाउँ हुँदैन र रिलिजहरू जुन अधिक समयमा अवस्थित छन्। तर तिनीहरूको बृद्धि र डिस्ने, वार्नर, सेगा जस्ता कम्पनीहरूसँग काम गर्दा, यी फ्रान्चाइजीहरू उनीहरूसँग सामेल हुँदा लामो पर्खाइ हुने छैन।
कम्पनीको वफादार सहयोगीको रूपमा पहिले नै आफ्नो बीटा संस्करणमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि मूल्य उनीहरूसँग भए बराबर हुनेछ। यस जस्तै Looking 5,99 मा हेर्दै। सबै वर्षको बखत तिनीहरू सदस्यता लिन्छन्, बर्षको सीमा बिना।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » नेटफ्लिक्स प्रवृत्ति यूटोमिकको साथ भिडियो खेलहरूमा आउँदछ
Typ 365 लोगोको चुनौती जुन उनीहरूको टाइपोग्राफीमा अर्थ राख्छ
व्यापार कार्ड हस्तान्तरण गर्नु अघि छवटा अनिवार्य आदेशहरू